Ciidamo katirsan militariga oo qarax lagula eegtay Sh. Hoose – Radio Daljir
Ciidamo katirsan militariga oo qarax lagula eegtay Sh. Hoose
Abriil 21, 2019 7:53 b 0
Ugu yaraan laba askari ayaa geeriyootay, sadex kallena waa ay dhaawacmeen qarax lagu aasay wadada dhinaceeda oo lala eegtay ciidamo katirsan militariga dowladda oo marayay waddo ku taala deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeelada hoose.
Qaraxan ayaa waxaa sheegtay Al-shabaab.
Sidoo kalle weerar ayaa ka dhacay deegaanka Sabiid ee duleedka Afgooye, kaasi oo aan la ogayn khasaarihiisa, balse Al-shabaab ayaa sheegatay inay ku dileen sarkaal katirsanaa ciidamada dowladda.
Mareykanka oo sheegay inuu duqayn ka fuliyay Jamaame
Warka Habeenimo, Maxamed Xasan Dhalo, Daljir Caabudwaaq(dhegayso)